संस्कार एकेडेमीमा निशुल्क दन्त शिविर – Rajmarg Online
संस्कार एकेडेमीमा निशुल्क दन्त शिविर
दाङ, चैत ३० । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ ढोडेनीमा रहेको संस्कार ऐकेडेमीले आफनो विद्यार्थी र अभिभावकहरुको लागि निशुल्क दन्त शिविर आयोजना गरेको छ । सगरमाथा डेन्टल क्लिनिकको प्राविधिक सहयोगमा भएको शिविरबाट ५० जना भन्दा बढिको दाँतको उपचार गरिएको एकेडेमीले बताएको छ ।
एकेडेमीको नियमित कार्यक्रम अन्र्तगत शिविरको आयोजना गरिएको हो । शिविरको शुक्रबार एक कार्यक्रमका विच उद्घाटन गरिएको थियो । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेलको अध्यक्षता तथा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ का सदस्य कृष्ण घर्तिको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा हेमराज अधिकारी, प्रतिभा आचार्य र विवेक आयस्थले बोल्नु भएको थियो ।
शिविरमा डा. लालमणि सुबेदी र डा. समिर भण्डारीले दाँतको जाँच गर्नुभएको थियो । विद्यार्थीहरुमा दाँतको सरसफाईका लागि ध्यानाकर्षण गराउनका लागि शिविरले ठुलो भुमिका खेलेको विद्यालय परिवारले बताएको छ । कार्यक्रमको सहजीकरण संगीत अधिकारीले गर्नुभएको थियो ।